Ifulethi lonke eRapperswil, i-60m2 ukuya kuthi ga kubantu aba-4
Indawo entle, esembindini enamagumbi ama-3 kumgangatho woku-1. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela kunye namagumbi okulala ama-2 ubuninzi babantu aba-4. Igumbi lokuhlala elihle elinesofa, itafile, iTV yescreen esicaba kunye nebalcony. Umatshini wokuhlamba ukhoyo ukuze usetyenziswe ekwabelwana ngawo. Indawo yokupaka egciniweyo phambi kwendlu.
Nokuba yeyabathandi benkcubeko, abahloli besixeko okanye abaziingcali, kukho into yakhe wonke umntu eRapperswil.
Isixeko saseRose kwiLake Zurich sinento yokubonelela ngayo yonke incasa. Indawo intle kwaye yodwa. Zininzi iindlela zokuya kuRapperswil, nokuba kuselwandle, ngololiwe okanye ngemoto phezu kweSeedamm, nge-e-bike kwiHerzroute okanye ngeenyawo kwiJakobsweg.
Ukuze ufumane amagqabantshintshi esi sixeko sihle, ndincoma ukuba uzulazule kwiigadi zerozi ezimibalabala ukuya kwinduli yelinden kufutshane nenqaba. Ukutyelela kwipaki yenyamakazi kukwafanelekile.
Ukuhamba ngaphaya kwebhulorho yamaplanga ukusuka eRapperswil ukuya eHurden akufanele kuphoswe. Iintlobo ezininzi zezilwanyana zinokubonwa kwaye indalo inokuyonwatyiswa ngeyona ndlela isulungekileyo. Ilinganisa i-841m enomtsalane kwaye yavulwa ngo-2001.
Ndihlala eRapperswil, ekufutshane kakhulu, kwaye ndonwabile ukunika iindwendwe zam ngolwazi olusebenzayo, iingcebiso zokuhamba kunye nolunye uncedo.